Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » Kuphela li-10% kwiimoto ezibhiliyoni ezikhuselekileyo
Uphando olutsha oluvela eCanalys lubonisa ukuba iinkqubo zoncedo lomqhubi oluphambili (ADAS) zifakiwe kwi-10% yeemoto ezili-1 zezigidi ezisetyenziswa kwihlabathi liphela ekupheleni konyaka we-2020. Isinye kwisithathu seemoto ezintsha ngoku zithengisa ngeempawu ze-ADAS kwiimarike ezinkulu ezinje ngeMainland I-China, i-Yurophu, i-Japan kunye ne-US, kodwa izothatha iminyaka eliqela ngaphambi kokuba zifakwe kwisiqingatha sazo zonke iimoto ezindleleni zehlabathi.
Iimpawu ze-ADAS zibandakanya ukulawulwa kokuhamba ngenqanawa, ukunceda ukugcina iindlela, ukuqhawuka ngokukhawuleza, kunye nokulumkisa indawo engaboniyo. Usebenzisa iisenzi kunye neekhamera, amanqaku anokugcina isithuthi umgama obekiweyo ukusuka kwesinye isithuthi ngaphambili, ugcine isithuthi sigxile kumgaqo waso, ukuzisa isithuthi kwindawo yokumisa ngexesha likaxakeka, ukuchonga ezinye izithuthi okanye abahambi ngeenyawo abasondela nangaphezulu.
I-DAS kwiimoto ezintsha thengiswa
Iimpawu ze-ADAS ziya ngokuya zifumaneka njengomgangatho okanye njengokhetho kwiimoto eziphambili eziqhelekileyo nakwiimodeli zenqanaba lokungena. Njengomzekelo, uphando oluvela eCanalys lubonisa ukuba inqaku lokugcina ulondolozo lwendlela, oluthi xa luqalisiwe lubonelele ngoncedo lokuqhuba ukugcina isithuthi kumgaqo waso, lafakwa kwi-56% yeemoto ezintsha ezithengiswe eYurophu kwisiqingatha sokuqala sika-2021, 52% eJapan, 30% kwi-Mainland China kunye ne-63% e-US. IiCanalys zichaze zonke iinkalo ze-ADAS ezibandakanyiweyo kwiimoto ezintsha, ngentengiso enkulu rhoqo ngekota.
“Ukubandakanywa kweempawu ze-ADAS kwiimoto ezintsha kuya kuba nefuthe elihle kukhuseleko ezindleleni, kunciphise inani leengozi kwaye ngenxa yoko kufe abantu, njengoko uninzi lweengozi lubangelwa kukuphazamiseka komqhubi okanye ngempazamo. Iimpawu ze-ADAS zisebenza ngokuzimisela ukugcina abaqhubi, abakhweli kunye nabanye abasebenzisi bendlela bekhuselekile, utshilo uChris Jones, uMhlalutyi oyiNtloko wezithuthi eCanalys. “Kodwa ngelixa ukungena kwezi zixhobo zoncedo lwabaqhubi kwiimoto ezintsha kukhula ngesantya esihle, ngenxa yokuba ubudala obumiselweyo beemoto ezisetyenziswayo bungaphezulu kweminyaka eli-12 ubudala, kwaye iimoto ezingaphantsi kwezigidi ezingama-75 ziya kuthengiswa ngo-2021, kuyakuthatha iminyaka emininzi ngaphambi kwesiqingatha seebhiliyoni zeemoto ezisetyenzisiweyo kwihlabathi jikelele.
I-ADAS kwi bhaliswe iimoto ezisetyenziswayo
“Ekupheleni konyaka ka-2020, Canalys ziqikelela ukuba bekukho iimoto eziyi-1.05 zeebhiliyoni ezisetyenziswa kwihlabathi liphela. Kodwa ezona mpawu ziphambili ze-ADAS zafakwa kuphela malunga ne-10%, utshilo uJones. “Ukucinga ukuba inani elipheleleyo leemoto ezisetyenzisiweyo lihleli phantse kwisigidi esinye sezigidi kule minyaka ilishumi, eli lithuba elimangalisayo lexesha elide kubenzi beemoto kwaye ngakumbi abo banikezela ngetekhnoloji yeADAS kunye namaqabane abo. Iimoto ezizigidi ezingama-900 ezisendleleni ngoku azinazo iimpawu ze-ADAS.
“Ukubuyisela kwakhona amanqaku e-ADAS kwizithuthi ezindala ayisiyiyo inketho- izibonelelo zokhuselo kufuneka zize ngeemoto ezintsha. Ithuba le-ADAS kule minyaka ilishumi izayo nangaphaya likhulu kakhulu, utshilo uSandy Fitzpatrick, i-VP eCanalys. “Uqoqosho lwesikali luyakwehlisa ixabiso lamava woluvo afunekayo kwiADAS, kodwa ngaphandle koku, iCanalys ngoku iqikelela ukuba ziipesenti ezingama-30 kuphela zeemoto ezisetyenzisiweyo eziza kuba neempawu ze-ADAS ngo-2025 kunye nama-50% ngonyaka wama-2030. njengomgangatho kuzo zonke izithuthi zabo ezintsha, ngaphandle kwexabiso eliphambili, baya kuba nokhuphiswano. ”
Ukufakwa okunyanzelekileyo kwe-ADAS kwiimoto ezintsha kuya kunceda ukwandisa ukungena. Izikimu zokurhangqa ukususa ezindala, ukungcolisa ngakumbi, iimoto ezingakhuselekanga ezindleleni ziya kunceda nazo. Kodwa unxibelelwano olomeleleyo, ukuveliswa kwebango kunye nemfundo malunga nezibonelelo ze-ADAS ngumba ophambili- abathengi kufuneka bajonge iimoto ezine-ADAS, iimpawu kufuneka kube lula ukuzisebenzisa, kufuneka baphucule bangathinteli amava okuqhuba, kwaye abaqhubi kufuneka bathembe kwaye basebenzise Iimbonakalo.
Ngelishwa, ngokunqongophala kwamacandelo kunye nefuthe lobhubhane, ishishini leemoto lifumene isixa esikhulu sokuphazamiseka kwiinyanga ezili-18 ezidlulileyo. Ngamaxesha amade wokulinda iimoto ezintsha, intengiso yemoto esele isetyenzisiwe inexesha elitsha lokuqesha. Nge-ADAS encinci kwiimoto ezisetyenzisiweyo, ukukhula kokungena kwe-ADAS kuya kuchaphazeleka kwixesha elifutshane.